Izindlela zokwelapha zasekhaya eziyi-12 zokutheleleka ngemvubelo (ukwelashwa nokuvikela) - Ukuphila Kahle | Julayi 2021
Imfundo Yezempilo Umphakathi Inkampani, Imfundo Yezempilo Izilwane Ezifuywayo Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, Izindaba Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Umphakathi, Inkampani Izindaba Imfundo Yezempilo, Izindaba Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Inkampani, The Checkout
Main >> Ukuphila Kahle >> Izindlela zokwelapha zasekhaya eziyi-12 zokutheleleka ngemvubelo
Izindlela zokwelapha zasekhaya eziyi-12 zokutheleleka ngemvubelo
Ngenkathi ukutheleleka ngemvubelo kungaba yinto eyejwayelekile, futhi kungacasula, futhi kubi nakakhulu, kuhlaze abesifazane. Yize ukutheleleka okunzima kungadinga uhambo oluya ehhovisi likadokotela kanye nemithi kadokotela, kunezinketho zokuthenga kanye namakhambi amaningana asekhaya okutheleleka ngemvubelo. Funda ukuthi ungabona kanjani ukutheleleka kwemvubelo, ukuthi uzoya nini kudokotela, ukuthi ungalapha kanjani ukutheleleka kwemvubelo ekhaya nokuthi ungazivikela kanjani ekuphindaphindeni.
Izinhlobo zezifo zemvubelo
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezifo zemvubelo, kepha konke kwenzeka lapho indawo yomzimba itheleleka ngesikhunta esifana nemvubelo esibizwa nge-candida (mayelana nokutheleleka ngemvubelo). Le fungus ikhula kahle ezindaweni ezimanzi, ezifudumele nezigoqiwe zesikhumba, njenge-groin, ngaphansi kwesifuba, noma emakhwapheni. I-Candidiasis wuhlobo oluyinhloko lokutheleleka kwefungal emzimbeni: Kubangelwa imvubelo futhi kungenzeka emlonyeni, emathunjini, emphinjeni nakwisitho sangasese sowesifazane, kuchaza UNiket sonpal , MD, i-internist kanye ne-gastroenterologist eNew York. Uma ingelashwa kahle ngemithi, kungenzeka ikhule ingalawuleki futhi ithelele izinso zakho nenhliziyo yakho.
Kunezinhlobo eziningi zezifo ezibangelwa yi-candida fungus, kuya ngendawo esemzimbeni okwenzekayo nohlobo lwe-candida olukhona. Ngenkathi zinokuqubuka okuthile kwezimpawu, zingaba nezimpawu ezahlukahlukene. Izifo ezivame kakhulu ze-candida yilezi:
I-Candidiasis enqamulelayo kwenzeka lapho isikhumba emzimbeni sinegciwane. Izindawo ezejwayelekile i-candida ezokhula kuzo isikhumba phakathi kweminwe noma izinzwane, izinzipho, amakhwapha, ngaphansi kwamabele, noma ezungeze imbila. Uphawu oluyinhloko ukuqubuka okubomvu, okulumayo.
Ukuqubuka kwe-diaper ezinganeni kwesinye isikhathi kungabangelwa ukwanda kwe-candida, okwenzeka lapho kunendawo enomswakama evela kumanabukeni amanzi asiza i-candida ukuba ichume. Ukuqubuka okubomvu kuvela phakathi kwezikhumba zesikhumba kanti amachashazi amancane abomvu amele indawo enegciwane.
I-thrush yomlomo kwenzeka lapho i-candidiasis ithinta ulwelwesi lomlomo noma lomphimbo. I-Oral thrush iveza njengezilonda ezimhlophe ezingaphakathi kwezihlathi noma olimini. Izimpawu zingafaka futhi ukuphefumula kabi, ubuhlungu ngenkathi ugwinya, ukungajwayelekile kokunambitheka, nokoma komlomo (okuningi nge-thrush yomlomo).
Ukutheleleka kwemvubelo yesitho sangasese sowesifazane , okubizwa nangokuthi i-vulvovaginal candidiasis, kwenzeka lapho kunokuchichima kwe-candida esithweni sangasese. I-Candida albicans ingumkhuhlane ojwayelekile wezifo zemvubelo. Izimpawu zokutheleleka ngemvubelo yesitho sangasese sowesifazane ukucasuka, ukulunywa, ukuvuvukala, kanye nokukhishwa kwesisu sowesifazane okumhlophe okumhlophe.
Ukutheleleka ngemvubelo kuvamile futhi kwenzeka kwabesifazane abathathu kwabane okungenani kanye empilweni yabo, kusho uDkt. Sonpal. Ngoba ukutheleleka kwemvubelo yesitho sangasese sowesifazane kwenzeka kubantu besifazane abaningi, le ndatshana izogxila ekwelashweni nasekuvinjelweni kwezifo zemvubelo yesitho sangasese sowesifazane kuphela.
Ngabe ukutheleleka ngemvubelo kungazimela ngokwakho?
Izinhlobo ezincane zezifo zemvubelo zinethuba lokuzihambela zodwa, kuchaza uDkt. Sonpal. Kodwa-ke, akunconywa ukuthi ungakunaki ukutheleleka kwemvubelo ngoba kungenzeka ukuthi kubuye uma kungenakwelashwa.
Ngenkathi abanye abantu bengakhetha ukuzama amakhambi asekhaya okutheleleka ngemvubelo noma izindlela zokwelashwa, kunabantu abathile okufanele bavakashele udokotela lapho benezimpawu zokutheleleka ngemvubelo. Lezi ziguli zifaka:
iyiphi i-cialis engcono noma i-viagra?
Labo abanezifo zemvubelo eziphindaphindayo (amahlandla amane noma ngaphezulu ngonyaka)
Labo okungenzeka bavezwe izifo ezithathelwana ngocansi (STD)
Abesifazane abangaqiniseki ukuthi izimpawu zabo zivela yini ekungenweni yimvubelo
Abantu abangaphumeleli ngamakhambi asekhaya noma ngemithi yokuthenga
Iziguli ezinesifo sikashukela esingalawulwa noma amasosha omzimba abuthakathaka ngenxa yemithi ethile noma izimo ezifana ne-HIV
Yini udokotela angayibeka ngezifo zemvubelo?
Imishanguzo yokulwa nesikhunta iyathengisa ukutheleleka futhi iyatholakala kokhilimu noma kuma-suppositories wohlelo lwangaphakathi. Ukutheleleka ngemvubelo kungahlala izinsuku ezintathu kuya emavikini amabili, ngakho-ke kukhona ukwelashwa kosuku olulodwa, kwezinsuku ezintathu, noma kwesonto.
Kukhona nama-anti-itch antifungal okhilimu eza kanye nokwelashwa okuningi ukusiza ukulunywa kwangaphandle. Imikhiqizo ethandwa kakhulu yama-antifungal okhilimu ukwelapha ukutheleleka kwemvubelo yesitho sangasese sowesifazaneMonistat(thola isigqebhezana seMonistat | Yini iMonistat?) noma iVagistat. Lezi zindlela zokwelapha ziyatholakala naku-inthanethi kulabo abangakhululekile ukuzithenga esitolo.
Umhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo anganqumaI-Diflucan (amakhuphoni e-Diflucan | Imininingwane ye-Diflucan)i-fluconazole ( amakhuphoni we-fluconazole |imininingwane ye-fluconazole)ithebhulethi ezokwelapha ukutheleleka kwe-fungal vaginal, noma i-antifungal kadokotela efana ne-terconazole (Amakhuphoni weTersonazole |imininingwane ye-terponazole), efakwa ngaphakathi ngesikhathi sokulala.
Amakhambi asekhaya wezifo zemvubelo
Kunezindlela zemvelo zokwelapha ukutheleleka ngemvubelo. Le mithi yasekhaya yokutheleleka ngemvubelo ilungele labo abafuna ukuhamba ngendlela yemvelo neqondayo.
1. I-apula cider uviniga
I-Apple cider uviniga Kutholakale ukuthi kuvimbela ukukhula kwama-candida albicans, uhlobo lwesikhunta oluvame ukudala izifo zemvubelo.
Ukuze usebenzise leli khambi lemvelo, geza bese ufaka inkomishi uhhafu we-apula cider uviniga bese ucwilisa kubhavu okungenani imizuzu engama-20.
Ungalokothi usebenzise i-apula cider uviniga ngamandla aphelele. Ngenxa yekhono le-apple cider lokubulala amabhaktheriya nesikhunta, lingabulala nama-bacterium anempilo emzimbeni. Nciphisa uviniga we-apula ngaphambi kokuwusebenzisa.
2. I-boric acid
I-boric acid suppositories yokulungisa izifo zemvubelo ngenxa yezakhi ze-boric acid's antiseptic. Ngenkathi ucwaningo lusekela ukusetshenziswa kwalawa ma-suppository, kuphetha ngokuthi lokhu kufanele kusetshenziselwe ukuphindaphinda futhi kube nzima ukwelapha izifo zemvubelo. Ngenxa yokuthi i-boric acid inamandla amakhulu, ukwelashwa okunamandla kufanele kusetshenziswe kuqala.
3. Amafutha kakhukhunathi
Uwoyela kakhukhunathi, othathwe enyameni yamakhukhunathi, unezakhi zemvelo zokulwa nokuvuvukala. A Kwezesayensi funda uwoyela kakhukhunathi otholakele ungasiza ukuvimbela amagciwane e-candida abangela ukutheleleka kwemvubelo. Ukuze usebenzise le ndlela yokwelapha, maneka uwoyela kakhukhunathi endaweni ethintekile.
4. Ijusi le-Cranberry noma amaphilisi
Ijusi le-Cranberry itholakale isiza izifo zomgudu womchamo ngokuvimbela ukwakheka kwama-candida albicans (ukhunta odala ukutheleleka kwemvubelo). Yize ucwaningo lungakhombisanga amandla alo okusiza ukwelapha ama-candida albicans esithweni sangasese, abanye besifazane bathi banemiphumela. Ijusi le-Cranberry namaphilisi nakho kunevithamini C ephezulu kakhulu, nayo engasiza ekuvimbeleni ukutheleleka.
Ama-douches e-counter-counter angalwa nokutheleleka kwemvubelo futhi aqede ukuvuvukala nokucasuka. Noma kunjalo, izifundo eziningi khombisa imiphumela emibi ye-douching, futhi zimbalwa izifundo ezinikeza imiphumela emihle. Ngokusho kwe- IHhovisi Lezempilo Labesifazane , odokotela bancoma ukuthi abesifazane bangadaki ngoba ukuxubha kungaholela ezinkingeni zokukhulelwa, ukutheleleka kwesitho sangasese sowesifazane, kanye nezifo ezithathelwana ngocansi (ama-STI).
Uwoyela kagalikhi nogalikhi kungama-antifungal agents aziwayo. Izifundo ngithole nokuthi ine-antifungal activity against candida albicans. Ngenkathi izindlela eziningi zendabuko zingancoma ukuthi kufakwe i-clove kagalikhi ngqo esithweni sangasese, indlela engatheni kangako ukufaka nje ugarlic omusha ekudleni bese ukufaka ekudleni okuningi.
7. I-hydrogen peroxide
I-Hydrogen peroxide iyi- isinqandakuvunda esinamandla lokho kutholwe ukubulala imvubelo. Akuzange kufundwe ngokukhethekile ngezifo zesifo sangasese semvubelo. Ngaphambi kokufaka isicelo esithweni sangasese sowesifazane, qiniseka ukuthi unciphisa i-hydrogen peroxide kuqala.
8. Amafutha e-Oregano
Uwoyela we-Oregano, noma uwoyela we-origanum, ukhonjisiwe kuvimbela ukukhula wama-candida albicans. Ukuze usebenzise uwoyela we-oregano, sebenzisa amaconsi ambalwa ku-ejenti yenethiwekhi, njengamafutha kakhukhunathi noma amafutha omnqumo, bese usebenza endaweni ethintekile.
Ama-Probiotic aqukethe amabhaktheriya abukhoma, njengamagciwane I-Lactobacillus acidophilus , esiza ukukhuthaza ibhalansi enempilo yamagciwane esithweni sangasese.Bangaphatha noma bavimbele i-vaginosis yebhaktheriya kanye nezifo zomgudu womchamo ngaphezu kokutheleleka ngemvubelo.
Thenga ama-probiotic supplements online noma ezitolo. Lezi zithasiselo zomlomo zingathatha izinsuku ezifika kwezili-10 ukukhombisa imiphumela. Ukwehlisa ubude besikhathi semiphumela, abanye besifazane basebenzise ama-probiotic njengama-suppositories esitho sangasese sowesifazane. Ukudla iyogathi (enamasiko aphilayo futhi asebenzayo) kungenye indlela enhle yokwandisa ukuphuza ama-probiotic.
Kodwa-ke, njengamakhambi amaningi emvelo, kukhona ukungabi bikho kobufakazi bokuthi ama-probiotic ayelapha izifo zemvubelo. Abaphenyi basacwaninga ama-probiotic wokutheleleka ngemvubelo, kepha odokotela abaningi bancoma ukuthatha eyodwa noma nini lapho kunqunywa i-antibiotic, njengoba ukutheleleka kwemvubelo kungumphumela ohlangothini lwama-antibiotics .
OKUSHIWO: Funda ukuthi imaphi ama-probiotic ahamba phambili
10. Amafutha esihlahla setiye
Uwoyela womuthi wetiye uwoyela obalulekile onezinto ezibulala ukungunda, abanye abantu abathi belapha imvubelo izifo. Isebenza nge ukubulala izindonga zeseli nolwelwesi lwemvubelo. Ngenkathi kudingeka izifundo eziningi njengamanje, isifundo se-2015 ithole ukuthi amakhosethi wesitho sangasese sowesifazane aqukethe uwoyela wesihlahla setiye akwazi ukusebenza njenge-fungicidal agent ngaleyo ndlela ebulala ama-candida albicans.
Njengawo wonke amafutha abalulekile, sebenzisa amaconsi ambalwa kawoyela wetiye ngoyili wesithwali lapho uwusebenzisa emzimbeni. Abesifazane bangathenga amakhosombe wesitho sangasese sowesifazane ngoyela wetiye online.
11. Uvithamini C
UVitamin C (Vitamin C amakhuphoni | Yini i-Vitamin C?) Kukhulisa ukuzivikela komzimba futhi, ngokuqina kwamasosha omzimba, umzimba uyakwazi ukulwa nokutheleleka kwemvubelo kangcono. Faka i-vitamin C eyengeziwe ngokuthatha ibhekwa noma udle izithelo nemifino ecebile ngo-vitamin C njengamawolintshi ne-broccoli.
I-yogurt (enamasiko aphilayo nasebenza) iyindlela enhle yokwelapha ukutheleleka ngemvubelo ngenxa yokugxila kwayo okuphezulu kwama-probiotic. Njengoba kushiwo ngenhla, ama-probiotic angasiza ekulweni nama-candida albicans. A isifundo sakamuva ithole ukuthi ukungeniswa kweyogathi equkethe ama-probiotic nge I-Lactobacillus acidophilus kusiza ukucindezela ukukhula kwemvubelo. Ngenkathi ukudla i-yogurt ngama-probiotic kungathuthukisa ukutheleleka kwemvubelo, abanye besifazane baze bathole ukukhululeka ngokufaka i-tampon ku-yogurt bese beyifaka esithweni sangasese sowesifazane, bekhumbula ukuyiguqula kaningi. Ngalolu hlelo sebenzisa kuphela i-yogurt elula, engenashukela noma i-yogurt yama-Greek engenashukela. I-yogurt equkethe ushukela izosiza ukuthi i-candida ikhule futhi ichume.
Ungakuvimbela kanjani ukutheleleka ngemvubelo
Kunezindlela eziningi zokuvimbela ukutheleleka kwemvubelo.
ngaphezulu kwemithi yokuphikisa yokungezwani nekati
Gwema ukusetshenziswa kwama-antibiotic okungadingekile. Ama-antibiotic angabulala amagciwane aphilile esithweni sangasese, abangele ukugcwala kwemvubelo, ngaleyo ndlela kuholele ekuthelelekeni kwemvubelo.
Gqoka izingubo zangaphansi zikakotini. Izimpahla zangaphansi ezikhululekile, zikakotini zilungele kakhulu i-microbiome enempilo. Gwema izingubo eziqinile futhi ezingaphefumuleki, njengama-leggings. Lezi zingubo zingakha indawo enomswakama, emanzi, okuyindawo ekahle yokugcwala kwe-candida. Ngenxa yalokhu, kubalulekile futhi ukushintsha izingubo ezimanzi noma ezijulukayo, njengezimpahla zokuzivocavoca noma izingubo zokubhukuda, ngokushesha.
Gwema ama-tubs ashisayo nokushisa okugeza okushisayo,okukhuthaza ukukhula kwe-candida, ngenxa yezindawo ezifudumele, ezinomswakama.
Thatha ama-probioticnoma udle iyogathinama-probiotic ngoba asiza ukulinganisa i-microflora yesitho sangasese sowesifazane. Kanye nokwelashwa kwezifo zemvubelo, ama-probiotic ayasiza ekuvikeleni ukutheleleka ngemvubelo. I-probiotic engcono kakhulu ongayithatha kuzoba nalabo abaqukethe i- ILactobacillus rhamnosus GR-1 amagciwane .
Gwema izindlela zokuziphatha ezingaholela ekungenweni yimvubelo, njenge inhlanzeko engeyinhle. Lapho wenza imikhuba yenhlanzeko yomuntu siqu, gwema i-douching, izesheli ezinamakha noma ezithanjiswayo, kanye nemikhiqizo yokuhlanzeka enamakha eduze nezitho zangasese, ezingalahla ibhalansi ye-microflora yowesifazane.
Gwema ukudla okunoshukela nokwenziwe . Imvubelo ikhula kusuka kushukela, ngakho-ke lokhu kungadala insalela yokukhula kwemvubelo.
Izimbangela zokutheleleka njalo kwemvubelo
Abanye besifazane bachaphazeleka kalula ekuthelelekeni kwemvubelo kunabanye futhi bazoba nokutheleleka okuphindaphindayo kwemvubelo noma ukutheleleka okungapheli kwemvubelo. Kunezizathu ezimbalwa okungenzeka ukuthi umuntu angabhekana nokutheleleka okuvamile kwemvubelo:
Umsebenzi wezocansi . Ngenkathi ukutheleleka ngemvubelo kungesona isifo esithathelwana ngocansi (STI), kungenzeka ukuthi abalingani badlulisele i-candida komunye nomunye. Ukuvimbela lokhu, sebenzisa amakhondomu noma amadamu amazinyo futhi wenze inhlanzeko ngemuva kocansi, njengokugeza. Gwema ukuya ocansini lapho omunye umlingani enesifo semvubelo.
Ukutheleleka kokuqala kwemvubelo akuzange kuphathwe ngokuphelele noma ukutheleleka kwemvubelo kubangelwa i uhlobo olungazweli emthini . Izimpawu zinganyamalala ngaphambi kokuba ukutheleleka kulashwe ngokuphelele. Lapho lokhu kwenzeka, ukutheleleka kwemvubelo kuzobuya. Kukhona futhi izinhlobo zemvubelo ezingazweli emithini, okwenza kube nzima ukuqeda kunezinye.
Akuyona ukutheleleka kwemvubelo. Kunezinye izifo, njenge-bacterial vaginosis, noma ama-STI, ezingaba nezimpawu ezifanayo. Lesi ngesinye sezizathu ezibaluleke kakhulu zokuvakashela udokotela, njengodokotela wezifo zabesifazane noma udokotela wokunakekelwa okuyisisekelo, lapho ukutheleleka kwemvubelo kungabonakali.
Labo abanezimo ezithile, njenge amasosha omzimba angasebenzi kahle , ukukhulelwa ,noma isifo sikashukela esingalawulwa ,zisengozini yokutheleleka ngemvubelo.
Yize zingasiza, amakhambi asekhaya okutheleleka ngemvubelo awalawulwa yi-U.S. Food and Drug Administration. Imiphumela iyehluka. Uma izimpawu zingaxazululi ezinsukwini ezimbalwa, qiniseka ukubona umhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo.
Yikuphi ukwesekwa kwe-magnesium okungifanele?
IBuspirone vs. Xanax: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
wazi kanjani ukuthi i-viagra isebenza kanjani
ukuthatha i-advil ne-tylenol ndawonye imiphumela emibi
uvitamin d amayunithi angama-50 000 ngaphezulu kwekhawunta
lapho ungathola khona isibhamu sokugoma ekolishi
amakhambi asekhaya okususa imvubelo izifo